MusicMoz - Regional: Africa: Zimbabwe
Top » Regional » Africa » Zimbabwe
Dandemutande: A Resource for Zimbabwean Music - Dandemutande: A resource for lovers of Zimbabwean marimba and mbira music, including a calendar of events worldwide, a resource guide, a mail order catalog, and articles about the music, the instruments, and the people who play them.
Kunzwana Trust - A non-profit-making organisation which fosters the practice and study of indigenous music in Zimbabwe.
Mbira - Mbira is a resource for people around the world who have an interest in Mbira, Marimba and Chimurenga styles of music from the indigenous cultures of Zimbabwe. Related topics, Shona and Ndebele customs, Shona language and literature, traditions and beliefs as they relate to mbira music is also discussed.
Mbira: Constraint and Mobility in Shona Society - Scolarly paper by Sam Ottenhoff, Kenyon College
Rhythms of the Continent: Zimbabwe - Farai Sevenzo hears from Zimbabwe's top musicians on their active role in the current political turmoil. (BBC World Service).
Shona Mbira Music of Zimbabwe - MBIRA is a non-profit organization whose purpose is to educate the public regarding traditional Shona music of Zimbabwe, including mbira music, and to develop a library of recordings to preserve that music.
Southern African and Zimbabwean Music Resource Site - Extensive bibliographies and links for Southern African music, with an emphasis on Zimbabwe and mbira.
Spirit Talk Mbira - Website of Zimbabwe Mbira band
The Music of Zimbabwe - Collection of more than 20 excellent pages on all aspects of traditional and contemporary music in Zimbabwe.
Zimbabwe Frontline Jukebox - Information and short MP3 clips of music by Chimurenga musicians.
Zimbabwean Music Festival - The Zimbabwean Music Festival is a unique three-day celebration of music from Zimbabwe, complete with workshops and concerts featuring guest musicians from Zimbabwe and North American teachers, performers and students. The annual festival is held in western North America.